Moto kurwa & kununura michina Fekitori - China Moto kurwa & kununura michina Vagadziri, Vatengesi
Hydraulic Simba Chikwata
Muenzaniso: BJQ63 / 0.6 Kushanda: BJQ63 / 0.6 Hydraulic Power Unit inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo yekununura tsaona dzemumigwagwa, kuyamura kwenjodzi uye kununura tsaona. Ndiyo sosi yesimba ye hydraulic yekumanikidza yekushandisa yekushandisa. Chinhu Chinokosha: Wide use Yakakwira uye yakadzika miviri padanho kumanikidza kuburitsa, otomatiki kutendeuka, uye nekukurumidza nguva yekununura Inogona kushandiswa kwenguva yakareba. Inoshandisa avhiyesheni hydraulic mafuta, kuitira kuti igone kushanda pasi pekupisa -30 ℃ kusvika 55 ℃. Iyo inogona panguva imwe chete kubatanidza maviri seti yezvishandiso ...
Hydraulic Kusanganisa maturusi
Muenzaniso: GYJK-36.8 ～ 42.7 / 20-3 Chikumbiro GYJK-36.8 ～ 42.7 / 20-3 Hydraulic Combi-Tool Cutter-Spreader inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo yekununura tsaona dzemumugwagwa, kudengenyeka kwedambudziko, kuponeswa kwetsaona zvichingodaro. Iyo inokodzera yekununura nhare. Cheka chivakwa chesimbi, zvikamu zvemota, pombi nesimbi sheet. Hunhu GYJK-36.8 ～ 42.7 / 20-3 Hydraulic Combi-Chishandiso Chekucheka-Muparadzi unosanganisira shear, kuwedzera uye traction. Rudzi urwu rwechishandiso rwakaenzana ne clipper uye anowedzera ...
Hydraulic Ram / Hydraulic tsvimbo tsigiro
Muenzaniso: GYCD-130/750 Kushanda: GYCD-130/750 Hydraulic rutsigiro Rod inoshandiswa zvakanyanya mumunda wegwagwa nenjodzi yenjanji, njodzi yemhepo uye kununura pamhenderekedzo, zvivakwa uye kuyamura njodzi. Zvinokosha Zvimiro: Oiri humburumbira inoumbwa nesimba rakakura risingaremi chiwanikwa. Yekubatsira michina: mandril yekutakura Zvinotora zvishoma kubatira, uye zvobva zvamhanyisa nzira yekununura. Mhedzisiro yemazino antiskid akanyatsotsanangurwa, saka haizotsvedza pasi pekunetseka. Two-nzira hydraulic zvechizarira pamwe WI ...
Muenzaniso: GYJQ-25/125 Brand: TOPSKY Kushanda: GYJQ-25/125 inoshandiswa zvakanyanya mukununura kwenjanji yemugwagwa uye njanji yemotokari, njodzi dzekudengenyeka kwenyika, chivakwa chakakoromoka, njodzi yemhepo, njodzi dzegungwa zvichingodaro. Kucheka Range: zvigadzirwa zvemotokari, simbi mamiriro, pombi, profiled bar, mahwendefa esimbi zvichingodaro. Unhu: Nereza chakagadzirwa yepamusoro kupisa kurapwa chishandiso simbi. Pamusoro yakarapwa ne anodizing. Saka ine kusakara kwakanaka. Kufamba zvikamu zvakagadzirirwa casing inodzivirira. Iyo ...
Muenzaniso: GYKZ-38.7 ～ 59.7 ／ 600 Kushanda: GYKZ-38.7 ～ 59.7 ／ 600 Hydraulic Spreader inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo yekununura tsaona dzemumigwagwa, kununurwa kwenjodzi, kuponeswa kwetsaona zvichingodaro. Iyo inoshandiswa pakufambisa uye nekusimudza chipingamupinyi, kutsemura kutsemuka uye kuwedzera iyo enterclose. Inogona kukanganisa chimiro chesimbi uye kubvarura ndiro yesimbi yemota pamusoro. Inobatana nezip uye inobvisa zvipingamupinyi mumigwagwa. Unhu: Kuwedzera kureba: 600mm Zvinotora nguva diki apo ope ...
Chinyorwa pombi Model BS-63 / 0.07
Feature Inotsigira Simba sosi yeiyo imwechete interface hydraulic chishandiso akateedzana. Hapana mafuta kana magetsi anodikanwa, mashandiro emanyorerwo anogona kuburitsa hydraulic simba, uye yemukati yakakwana inogona kusununguka kusununguka pakati pesimba uye yakaderera kumanikidza kugadzirisa kununura kushanda. 1. Imwe interface dhizaini, inogona kushanda pasi pekumanikidza, nhanho imwe. 2, 360-degree inotenderera snap interface, inoshanda zvakanyanya uye yakachengeteka mashandiro. Parameter Rated anoshanda kumanikidza: 63MPa Hydraulic mafuta tangi chinzvimbo: ≧ 2.0L Yakadzika Voltag ...
Heavy hydraulic rutsigiro gondohwe Model GYCD-120 / 450-750
Feature Iyo gondohwe inogona kushandiswa kutsigira, traction uye mamwe mashandiro panzvimbo yekununura. Uye zvakare, chimiro chechigadzirwa chakagadziridzwa, uye nharaunda yekutsigira uye sitiroko yakawedzerwa. Yakawedzera nzvimbo yekununura. 1. Double-chubhu imwechete-interface dhizaini, iyo inogona kuvhiyiwa ichimanikidzwa mune rimwe danho. 2.Iyo interface ndeye 360-degree inotenderera bhaa, iri nyore uye yakachengeteka kushanda. 3. Isina-kutedzemuka switch switch kune yakanyatso kushanda. 4. Inotora nzira mbiri ...
Heavy hydraulic aricheke Model GYJQ-28/125
Feature Mucheki anogona kushandiswa pamabasa akadai sekucheka uye kupatsanura panzvimbo yekununura. Uye zvakare, iyo yekumucheto zvinhu yakagadziridzwa kusimudzira kumucheto gloss. Yakawedzera banga pamuromo kuomarara, yakachengeteka panguva yekushandisa. 1. Double-chubhu imwechete-interface dhizaini, iyo inogona kuvhiyiwa ichimanikidzwa mune rimwe danho. 2.Iyo interface ndeye 360-degree inotenderera bhaa, iri nyore uye yakachengeteka kushanda. 3. Isina-kutedzemuka switch switch kweakawanda mashandiro 4. Iyo inotora maviri-nzira hydraulic loc ...
Heavy hydraulic cutter & spreader Muenzaniso: GYJK-25-40 / 28-10
Feature Iyo yekubatanidza chishandiso inogona kushandiswa mukuwedzera, kuveura, kupomba, uye kumwe kuita panzvimbo yekununura. Uye zvakare, iyo banga pamucheto zvinhu zvakagadziridzwa kusimudzira kupwanya kuramba uye banga kumucheto gloss. Yakawedzera banga pamuromo kuomarara, yakachengeteka panguva yekushandisa. 1. Double-chubhu imwechete-interface dhizaini, iyo inogona kuvhiyiwa ichimanikidzwa mune rimwe danho. 2.Iyo interface ndeye 360-degree inotenderera bhaa, iri nyore uye yakachengeteka kushanda. 3. Isina-kutsvedza switch switch kune zvimwe ...
Inorema hydraulic mota pombi BJQ-63 / 0.4S
Feature Iyo spreader inogona kushandiswa mukuwedzera, kudhonza, kubvarura, kusvina uye kumwe kuita panzvimbo yekununura. Uye zvakare, iyo shaya zvinhu zvakagadziridzwa kusimudzira anti-extrusion kugona, kukwidziridza chimiro chemukati chechigadzirwa, uye kuwedzera kuwedzera kwekuvhura daro. 1. Double-chubhu imwechete-interface dhizaini, iyo inogona kuvhiyiwa ichimanikidzwa mune rimwe danho. 2.Iyo interface ndeye 360-degree inotenderera bhaa, iri nyore uye yakachengeteka kushanda. 3. Isina-slip switch ...
Zvimiro Zvakatumirwa kunze injini yepeturu yeHonda, simba rakasimba uye mashandiro acho akatsiga. 1. Dual kuburitsa chimiro, inokwanisa kubatanidza michina miviri yekushandisa panguva imwe chete. 2, imwechete interface dhizaini, inogona kuvhiyiwa ichimanikidzwa, mune nhanho imwe. 3, 360-degree inotenderera snap interface, inoshanda zvakanyanya uye yakachengeteka mashandiro. 4. Kupisa kwakanaka kupisa kunoita kuti maawa ekushanda asashome. 5. Iyo yakaderera ruzha nhanho inobatsira iyo yekufona mhando pakati pevanunuri uye vanhu vakasungwa. 6. Kurema kurema uye diki saizi ...
Kurumidza plug yekuwedzera tsvimbo
1, saizi yakaenzana ndeye 125/150 / 200mm matatu.
2. Kurumidza kuisa mhando mhando bhurukwa dhizaini. "1 sekondi" kupedzisa iyo yekuwedzera tsvimbo uye pisitoni tsvimbo plug uye buritsa kubatana.
3, anti-skid knurling dhizaini, simbisa kubata uye kukweshera, zviri nyore kushandisa pasina skidding.